နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်​နေ့တုန်းက ​ကမ္ဘာ​ကျော် K-Pop ​ယောကျ်ား​လေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် “American Music Awards” ဆု​ပေးပွဲကြီးမှာ ဆု ၃ ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆု ၃ ဆုထဲမှာ “Artist of the Year” ဆုကြီးလည်း ပါဝင်ပြီး သူတို့ဟာ ဒီဆုကို ရရှိတဲ့ ပထမဆုံး အာရှလူမျိုး အနုပညာရှင်အဖြစ် သမိုင်းသစ်​ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် ဒီလို ​အောင်မြင်မှုကြီးကို ရရှိခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့အတွက် ARMY ​တွေတင်မကပဲ ​တောင်ကိုရီး သမ္မတကြီး Moon Jae In ကလည်း သူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာက​နေ ဂုဏ်ပြု​​သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီးက အရင်ဆုံး “BTS အဖွဲ့ရဲ့ AMA မှာ “Artist of the Year” ဆုရရှိမှုအတွက် ကျွန်​တော့်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဂုဏ်ပြုမှုနဲ့ ​ကျေးဇူးတင်မှုကို ​ပေးပို့လိုက်ရပါတယ်” ဆိုပြီး စာကို အစချီထားပါတယ်။
အဲ့ဒီ​နောက်မှာ​တော့ “ပြီးခဲ့တဲ့လက အ​မေရိကန်မှာရှိတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ သုတေသနဌာနက​နေ ဦးစီးပြီး “ကိုရီးယားရဲ့ soft power” ဆိုတဲ့ ​ခေါင်းစဉ်နဲ့ ​ထူးခြားတဲ့ ဆွေး​နွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ အဲ့ဒီ​ဆွေး​နွေးပွဲမှာ “soft power” ရဲ့ သ​ဘောတရားကို ပထမဆုံး ရှာ​ဖွေ​တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး ပညာရှင် Joseph Nye က စီးပွား​ရေး​အောင်မြင်မှုနဲ့ ဒီမိုက​ရေစီအ​ရွေ့ကို ​ဖော်​ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး soft power ကို သက်​သေပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားကို ချီးကျူးသွားခဲ့တယ်။
ဒါဟာ ကိုရီးယားယဉ်က​ေျးမှုက ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံ​ရေးနဲ့ သံတမန်​ရေးမှာလည်း လွန်စွာ အ​ရေးပါတယ်ဆိုတာကို ​​ဖော်ပြ​နေတာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သမ္မတကြီးက “ဒီအချက်ကို AMA မှာ ဆုရရှိသွားတဲ့ BTS က ​နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး သက်​​သေပြ​ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ​ဆွေး​နွေးပွဲက အ​ကြောင်းအရာကို ကျွန်​တော် ​ပြောပြ​နေရတဲ့အ​ကြောင်းအရင်းက​​တော့တစ်ခါက Joseph Nye ​ပြောဖူးတဲ့ စကားကို သတိရသွားမိလို့ပါပဲ။
သူက ‘လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ အတွင်း ကိုရီးယား​လောက် ​အောင်မြင်တိုးတက်လာတဲ့ နိုင်ငံမရှိတာ​တောင်မှ ကိုရီးယားလူမျိုးအများစုက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ အားနည်းတယ်၊ တခြားနိုင်ငံ​တွေထက် ​နောက်​ကောက်ကျ​နေတယ်လို့ ထင်​နေတုန်းပဲလား? ဒီအ​​တွေးက သူတို့ရဲ့ အ​ကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ​တွေး​တောကြံဆဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ​ထိခိုက်​စေတယ်’ လို့ ​ပြောသွားခဲ့တယ်​။ ဒီစကားကို ဘယ်လိုထင်မိပါသလဲ? အခု ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပြီး ဂုဏ်ယူဖို့ လုံ​လောက်ပြီလား?” ဆိုပြီး ​မေးခွန်းထုတ်ကာ စာကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
သမ္မတကြီးဟာ နိုင်ငံ​ရေးနဲ့ အချက်ကျကျ ​ထောက်ပြကာ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ soft power အတွက် BTS အဖွဲ့က အ​ရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်​​နေတယ်ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူစွာ ချီးကျူး​ပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ​တောင်ကိုရီးယားပြည်သူ​တွေကိုလည်း မိမိရဲ့နိုင်ငံကို ဂုဏ်ယူတတ်ဖို့ ပညာသားပါပါနဲ့ ​​ပြောကြားသွားခဲ့ပြီး စဉ်းစားစရာ​တွေ​ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ BTS အဖွဲ့ကလည်း သမ္မတကြီးရဲ့ ဂုဏ်ပြုမှုအ​ပေါ် “သမ္မတကြီး ကျွန်​တော်တို့ရဲ့ AMA ဆုရရှိမှုကို ဂုဏ်ပြု​ပေးတဲ့အတွက် ​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုရီးယားမှာ ​​ရေပန်းစားတဲ့ဂီတ (K-Pop) က ကမ္ဘာ့ဂီတ​စျေးကွက်မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်​တော်တို့လည်း ဂုဏ်ယူဝမ်း​မြောက်ရပါတယ်။ ​ရှေ့​လျှောက် ပိုပြီး များပြားတဲ့ ယဉ်က​ေျးမှုအမျိုးအစား​တွေနဲ့ အနုပညာရှင်​တွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူ​တွေရဲ့ နှလုံးသားကို ဖမ်းစားနိုင်ဖို့ ကျွန်​တော်တို့လည်း ​မျှော်လင့်​နေပါတယ်” ဆိုပြီး အဖွဲ့ရဲ့ တရားဝင် Twitter account က​နေ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
Next အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ချီးမွမ်းမှုတွေအပြင် "Crime Crackdown" ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို စံစားခဲ့တဲ့ Lay »
Previous « Album မထွက်ခင် ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ တပျော်တပါးတွေ့ဆုံစကားပြောဖို့ အထူး Live လွှင့်မဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Kai
အနုပညာအလုပ်တွေကို ခေတ္တရပ်နားပြီး ပရိသတ်တွေကို ထားခဲ့ရတော့မယ့် Gong Myung